Buzz Launcher Version: 1.5.4.17 Apk - Min Oaker
Android launcher Buzz Launcher Version: 1.5.4.17 Apk
Buzz Launcher Version: 1.5.4.17 Apk
by ပုသိမ်နည်းပညာ on 10:21 PM in Android launcher
Android ဖုန်းတွေထဲမှာ Home Screens တွေကို Launcher ခတ်မိုက်မိုက်လေးထားချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအ
တွက် New version လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိ မိုက်တယ်ဆိုတာ ပုံကို
မြင်တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်နော်။ သူအထဲမှာပါတဲ့ themes တွေကတော့အများကြီးပဲဗျာ။ 500.000 themes
တောင်ပါတယ်လို့ညွှန်းထားပါတယ်။ တစ်ကယ်လည်းပါတယ်နော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကလိပြီးမှ ကိုကိုမမ
တို့အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 10Mb ရှိပြီး Android:
“Buzz Launcher” isahighly customizable launcher that enables you to apply shared Homescreens to your own smartphone. Buzz Launcher is an ad-free custom launcher that has more than 500,000+ free themes (the largest number of free themes among launchers)! Freely download, apply, customize, share, and even create Homescreens! (Available from Android 4.0.3+)With Buzz Launcher, you can: • Customize so much more than just your wallpaper or theme.
Buzz Launcher is friends partnering with UCCW, The day before widget & Memo Widget, Sol Calendar & Sol Mail, Battery Widget Z, Power Toggles, Minimalistic Text.
By ပုသိမ်နည်းပညာ at 10:21 PM